Ukuqhagamshelana newebsite yethu
Izizinda kunye nokuHamba
ICarl Henry Domain Hosting Resellers
KwiZindlu zeZindlu ezingabonakaliyo
UCarl Henry Iingcebiso zeVidiyo zeVidiyo - Indlela yokufumana amaninzi amaLungu angamaLandeli abathandi beFans
Yenza Money Online
Ngaba ufuna ukwakha ishishini le-intanethi? Sinokukunceda nakweyiphi imboni!
UCarl Henry Global - Imenyu enkulu
I-Em @ il List Building
UKarl Henry Global. (Ubhalisiwe kwiSychelles - Inkampani No. 07816855) kwi-117 Orion Mall ePalest Street iVictoria Mahe Seychelles. UKarl Henry Global. kunye nayiphi na Ukwahlula uCarl Henry okanye inkampani ayigunyazisiwe yiGunya lokuPhathwa kwezeMali yase-UK okanye nayiphi na igunya elilawulayo lezemali elizweni jikelele kwaye ayikwazi kwaye ayinikezeli ngcebiso. Akukho nto iqulethwe kule website okanye amaxwebhu akhutshelwe ukuba iyenze okanye ifanele ithathwe ukuba ibe "ukukhuthazwa kwezemali" kwintsimi ye-21 yeeNkonzo zezeMali kunye neMakethi ye-2000 e-UK, okanye kufuneka ithathwe njengesimemo, okanye isincomo sokubandakanya umsebenzi wokutshala imali. Le webhusayithi iinjongo zokwazisa kuphela kwaye ayihlosekanga, kwaye ayiyiyo, yenze isiluleko sokutshala imali okanye nayiphi na icebo lokuthenga, ukubamba okanye ukuthengisa iziqinisekiso okanye ezinye izixhobo zemali. Akukho nanye UKarl Henry Global. abambisene nabo okanye abalawuli babo, amagosa kunye nabasebenzi baya kwamkela nayiphi na imbopheleleko malunga nemiphumo yanoma yiyiphi na into ethembekileyo okanye isenzo esithathwe ngokubhekiselele kuyo nayiphi na ingcaciso kule website okanye amaxwebhu afundwa kuyo. Sincoma ukuba ngaphambi kokuba uthathe naziphi na izigqibo zokutshala imali uthatha icebiso kumcebisi ofanelekileyo. Ngolwazi olungaphezulu qha ga mshelana info@carlhenryglobal.com
Eli xwebhu likhutshwa nguCarl Henry Global sa. ("CHG"), ngenjongo yokuthatha inxaxheba kwemali mboleko. Akukho mntu ugunyazisiweyo kwaye ulawulwa phantsi kwe-UK Financial Services kunye neMakethe ye-2000 ("FSMA") iceliwe ukuba ivume le mveliso yale Nwebhusayithi okanye amaxwebhu alayishiwe kuwo. Itholakala eUnited Kingdom ngokusesikweni ukuba kukukhushulwa kwemali phantsi kweeNkonzo zeMali kunye neMakethi ye-2000 (ukuKhuthazwa kwezeMali) i-2005 ("i-FPO") ngenxa yokuba isenziwa kuphela kubantu abemthethweni nabendalo e-UK abawela phantsi kokuxolelwa phantsi kwe-athikili ye-19 (ootitshala bezolimo-mali) okanye inqaku le-49 (iinkampani eziphezulu zexabiso elifanelekileyo kunye nemibutho) ye-FPO. Ngakumbi ngakumbi:
UKarl Henry Global. Awulawulwa yiGunya lokuPhathwa kweMali, okanye nayiphi na enye umlawuli wezezimali e-UK nakwamanye amazwe. Abathathi-nxaxheba abanelungelo lokuphakamisa isikhalazo kwi-Ombudsman yezeMali e-UK, okanye nangona kwenzeka ngokungagqibekanga nguCarl Henry Global. ibango phantsi kweSikimu seNkxaso-mali yeMbuyekezo yeMali. Le Mqulu ayidingekile ukuba ihambelane nemigangatho yokwenza ifom okanye umxholo weProspectus enyanzelisayo, njengoko ichazwe ngenjongo yeMigaqo yeProspectus ye-UK Authority Conduct Authority ("FCA"), njengokuthatha inxaxheba kwisibonelelo esichazwe apha kuyadingeka ukuba zibe kwiimali ezingaphezulu kwe-€ 100,000 ngamnye kumtyalomali.
Yonke imizamo yenziwe nguCarl Henry Global sa. ukubonakalisa ngokuchanekileyo iimveliso zethu kunye nemveliso esiyikhuthazayo kunye namandla abo. Nangona i-intengiso ye-intanethi ingomnye wabambalwa apho umntu unokufumana impumelelo enkulu yemali kunye notyalo-mali oluncinci kakhulu, akukho siqinisekiso sokuba uya kuzuza nayiphi na imali usebenzisa ubuchule kunye neengcamango kule website nakumaxwebhu alandiweyo. Imizekelo kulezi zinto ayinakutolika njengesithembiso okanye isiqinisekiso sokufumana imali. Ukufumana amandla kunokuxhomekeka ngokupheleleyo kumntu usebenzisa imveliso yethu, iingcamango kunye nobuchule. Asikukhuthazi amathuba oku "njengesiqhamo esisityebi".